Displaying items by tag: YBS Bus - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Displaying items by tag: YBS Bus
Wednesday, 15 July 2020 15:29
YPS ကဒျမြား စတငျအသုံးပွုနိုငျသညျ့ ယာဉျလိုငျးမြား
Saturday, 13 June 2020 01:34
YBS ယာဉျလိုငျးမြား ပွနျလညျတိုးခြဲ့ ပွေးဆှဲမညျ့
ကိုဗဈ-၁၉ရောဂါကာလအတှငျး ခရီးသှားပွညျသူမြား သှားလာမှုအဆငျပွစေရေေးနှငျ့ YBSယာဉျအစီးရေ မြား နစေ့ဉျမပွတျ တိုးခြဲ့ပွေးဆှဲလကျြရှိကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး သယျယူပို့ဆောငျရေး ကွီးကွပျကှပျကဲမှုအာဏာပိုငျအဖှဲ့ (YRTA)မှ သိရ သညျ။
Friday, 03 May 2019 16:18
လျှပ်စစ်မီး မကြာခဏပျက်နေသောကြောင့် YBS ယာဉ်လိုင်းများ CNG ထည့်သွင်းရန် ၅ နာရီနီးပါး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရ၍ YBS ကားလိုင်းများပြေးဆွဲရာတွင် ပြတ်တောက်မှုရှိနေ
ရန်​ကုန်​တိုင်းတွင်​ လျှပ်​စစ်​မီး မကြာခဏပျက်​​​​နေသောကြောင့် YBS ယာဉ်​လိုင်းများ CNG ထည့်သွင်းရန်​ ၅ နာရီနီးပါး တန်းစီ​စောင့်ဆိုင်း​​နေရ၍ YBS ကားလိုင်းများ​ပြေးဆွဲ​ပေးရာတွင်​ ပြတ်​​တောက်​မှုရှိ​နေပြီး လိုင်းကားစီးခရီးသည်​များ အခက်​အခဲဖြစ်​​နေလျက်​ရှိ​ကြောင်း သိရသည်​။
Tuesday, 23 April 2019 10:49
YBS နှင့် Air Con
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ သတင်း နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာပေါ်မှာ YBS ကားတွေအနေနှင့် Air Con ကားဖြစ်ပါလျက် နှင့် Air Con မဖွင့်ဘဲမောင်းသည့် အတွက်ကြောင့် ပူအိုက်လှသည့် နွေရာသီမှာ ဘတ်စ်ကားစီးရတာ အလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြောင်း ဆွေးနွေးကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်။
Monday, 01 April 2019 10:21
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း YBS အစီး ကိုးရာကျော် ပြေးဆွဲရန် လျာထား
မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း YBS ခရီးသည်တင်ယာဉ် အစီးကိုးရာကျာ် ပြေးဆွဲရန်လျာထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ သိရပါသည်။
Thursday, 10 January 2019 10:09
YBSယာဉ်စီးခပေးကတ်စနစ်ကို ယခုလအတွင်း ကားအစီး၄၀ဝ၀တွင် စမ်းသပ်တပ်ဆင်မည်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့်YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင်အသုံးပြုမည့် ယာဉ်စီးခပေးချေကတ်စနစ်ကိုလာမည့် ဇန်နဝါရီ ၁၆ရက် YBS နှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်၌ ကားအစီး၄၀ဝ၀ စမ်းသပ်တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ဇန်နဝါရီ ၈ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ပြောသည်။
Thursday, 13 September 2018 16:24
နေ့စဉ်သွားလာမှုအတွက် မြန်မာနိင်ငံဧ။် စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်တွင် အခြေခံလုပ်သားပြည်သူတို့ အဓိကအသုံးပြုနေသည်မှာ YBS ဖြစ်ပါသည်။
Friday, 07 September 2018 15:15
၀န်ဆောင်မှုအပြည့်အ၀မပေးနိုင်သော YBS ယာဉ်များ ပြေးဆွဲခွင့်ရပ်ဆိုင်းမည်
လာမည့်နှစ်မှစ၍ ၀န်ဆောင်မှုအပြည့်အ၀ မပေးနိုင်သော ခရီးသည်တင်ယာဉ်များကို YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် ပြေးဆွဲခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) မှ သိရပါတယ်။
Published in Rules & Regulations
Monday, 03 September 2018 14:15
လူကြပ်တဲ့ YBS ပေါ်မှာထိုင်ခုံနေရာရအောင်ဘယ်လိုစီးကြမလဲ ?
ကဲ.. Bus(YBS) ပေါ်မှာ ထိုင်ခုံနေရာရအောင်ဘယ်လိုစီးမလဲဆိုရင် " လူချောင်တဲ့ကားကိုရွေးစီးလေ" လို့ဖြေကြမဲ့သူများမှာပါ။
D Service [Myanmar] Co., Ltd.
King River Motor Services